वाणिज्य बैंकहरुको सेयर कति सस्तो ? « Aarthik Sanjal वाणिज्य बैंकहरुको सेयर कति सस्तो ? – Aarthik Sanjal
वाणिज्य बैंकहरुको सेयर कति सस्तो ?
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार १०:१२
काठमाडौं । खुद नाफा क्रमिक रुपमा बढाउँदै गएका वाणिज्य बैंकहरुको सेयर भाउ झन् सस्तो भइरहेको छ । नाफा निरन्तर बढ्ने तर भाउ भने सस्तो हुँदै जाँदा मूल्य आम्दानी अनुपात (पीइ रेसियो) पनि निकै कम हुन थालेको दखिन्छ । यसले दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहनेका लागि राम्रो मौका आएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका अधिकांश बैंकहरुले खुद नाफा वृद्धि गरेका छन् । नाफा बढ्दा अधिकांशको प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि सुधार आएको छ ।
नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी, नेटवर्थ, रिजर्भ लगायतका सूचक आकर्षक बन्दै जाँदा बजार भाउ घट्नु लगानीकर्ताका लागि सुनौलो अवसर हुन सक्छ । यही क्रममा हामीले सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरुको मूल्य आम्दानी अनुपात (पीइ रेसियो) प्रस्तुत गरेका छौं ।
लगानी गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीको समग्र वित्तीय सूचकहरुको राम्रो अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तै, अल्पकालीन होस् या दीर्घकालीन, दुवैथरीका लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण सूचकमध्ये पीइ रेसियो पनि एक हो । कम्पनीको बजार पछिल्लो भाउलाई प्रतिसेयर आम्दानीले भाग गर्दा आउने अनुपात नै पीइ रेसियो हो । पीइ रेसियोले कम्पनी ‘अन्डरभ्यालुड’ वा ‘ओभरभ्यालुड’ के हो भन्ने छुट्याउन मद्दत पुर्याउने भएकाले लगानीमा यसलाई महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ ।
सामान्यतयः पीइ रेसियो थोरै भएका कम्पनीहरुमा लगानी सुरक्षित मानिन्छ । तर पीइ कम हुँदैमा सधैं सबै कम्पनी राम्रा हुन्छन् भनेर मात्र चाहिँ बुझ्नु हुँदैन । अनि, पीइ केही बढी हुँदैनमा त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने पनि सधैं सोच्नु हुँदैन । यसमा अन्य केही पक्षहरुको पनि भूमिका रहने गर्छ । पीइसँगै अन्य सूचकहरु पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले त पीइसँग कम्पनीको ग्रोथ अवस्थालाई विशेष ख्याल गर्न थालिएको छ । भविष्यको सम्भावनातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ पीइ रेसियोको आधारमा तुलना गर्दा एउटै व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु वा एउटै इन्डस्ट्रीका बीचमा मात्र गर्न उचित हुन्छ । मूल्य आम्दानी अनुपातका केही सीमाहरु पनि रहेका छन् । कम्पनीको कमाई उसको विगतको कमाई हो । विगतको कमाईले मात्र सधैं भविष्यको नतीजा ग्यारेन्टी गर्दैन । विगतमा राम्रो कमाएको कम्पनीले भविष्यमा पनि राम्रो गर्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन ।
यसैगरी, विगतमा राम्रो परफर्मेन्स गर्न नसकेका कम्पनीले पनि भविष्यमा राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ । यसर्थ, लगानीकर्ताले यी विषयहरु पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्त्यमा, तर पीइ रेसियो लगानीकर्ताले विश्लेषण गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण सूचक हो । हेरौं वाणिज्य बैंकहरुको पीइ रेसियो ।
दुई बैंक बाहेक अन्यको पीइ २० भन्दा कम
कुनै पनि कम्पनीको पीइ रेसियोले १ रुपैयाँ प्रतिफल पाउन कति मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराउँछ । पीइ रेसियो २० भन्दा कम भएकालाई निकै सुरक्षित मान्ने चलन छ । सामान्यतयः पीइ रेसियो थोरै भएका कम्पनीहरुमा लगानी सुरक्षित मान्ने गरिन्छ । यसैबीच सूचीकृत २६ बैंक मध्ये २४ वटा बैंकको पीइ २० भन्दा कम रहेको छ । पीइ २० भन्दा थोरै बढी हुनेमा स्टान्डर्ड चार्टड र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् । पीइ २० को आधार पनि एउटा कन्जरभेटिभ मान्यता मात्र हो ।
(नोटः केही बैंकहरुले साधारण सभाबाट बोनस सेयर पारित गरिसके पनि त्यसलाई पुँजीकृत गरेको देखाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरुको पीइ रेसियो र इपीएसमा सामान्य फरक पर्न सक्छ ।) इशारा कोइरालाबाट